Nahazo loka 3 tsara indrindra izao ny Authority Tourism Authority Malta any Amerika Avaratra
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Malta » Nahazo loka 3 tsara indrindra izao ny Authority Tourism Authority Malta any Amerika Avaratra
Awards • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
(Avy amin'ny L ka hatramin'ny R: Michelle Buttigieg, Solontenan'ny Fahefana ara-pizahantany Malta, Amerika Avaratra miaraka amin'i Maura Lee Byrne, filoha lefitra sy Mpanonta, North Star Travel Group; Sary nahazoan-dalana: Vitaliy Piltser)
Ny Malta Tourism Authority (MTA) dia nomena anarana hoe Best Tourism Board Europe (volamena); Toerana tsara indrindra Mediterane (volafotsy); ary Programa Academy Agent Travel tsara indrindra (volafotsy) amin'ny 2021 Travvy Awards, ampiantranoin'ny TravAlliancemedia.
Ny 2021 Travvy Awards, amin'izao taona faha-7 izao, dia nahazo laza haingana ho toy ny Academy Awards an'ny indostrian'ny fitsangatsanganana any Etazonia.
Natao ny alarobia 10 Novambra tao Miami Beach, Florida, ny hetsika.
Ny Travvy's dia manaiky ny mpamatsy ambony indrindra, ny toerana haleha, ny mpanome teknolojia ary ny mahasarika azy, araka izay nofantenan'ireo izay mahafantatra azy ireo indrindra – mpandraharaha fitsangatsanganana.
“Nahazo telo Travvy Awards dia voninahitra lehibe ho an'i Malta, ary tena misy dikany aorian'ny areti-mifindra, ”hoy i Michelle Buttigieg, solontenan'ny MTA Amerika Avaratra. Nanampy izy hoe: "Te hisaotra manokana an'i Travalliance izahay noho ny fanohanan'izy ireo sy ireo mpandraharaha fitsangatsanganana mahafinaritra rehetra izay manohy mampiseho fahalianana lehibe amin'ny fianarana sy ny fivarotana. Destination Malta. Izany dia nahafahan'i Malta nanitatra sy nanamafy ny ezaka ara-barotra sy ny fifandraisana amin'ny vahoaka amin'ny tsena amerikana. Fotoana tsara izao handefasana mpanjifa any Malta satria misokatra indray izy io, azo antoka, be dia be ny atolotra, miaraka amin'ny lova tena mahaliana hojerena sy hankafizana, fety ary traikefa lafo vidy isan-karazany.
Hatramin'ny nanokafan'ny Malta Tourism Authority (MTA) ny solontenany tany Amerika Avaratra tamin'ny taona 2014, dia nitombo avo efatra heny ny fizahan-tany avy amin'ny tsenan'i Etazonia, talohan'ny covid.
Carlo Micallef, tale jeneralin'ny lefitry ny tale jeneralin'ny varotra, Malta Tourism Authority, dia nanampy hoe "Ny MTA dia tena mankasitraka ny nahazoana mari-pankasitrahana telo toy izany indray tao amin'ny tsena amerikana tena mifaninana izay mampiseho fa nankasitraka sy nanome valisoa ny orinasan'ny Malta Tourism Authority ny mpandraharaha fitsangatsanganana. hetsika mitohy na dia mandritra ny areti-mifindra aza. Ny hetsika ara-barotra & PR an'ny MTA any Amerika Avaratra dia nitohy tsy tapaka niaraka tamin'ny hetsika an-tserasera isan-karazany izay nanampy ireo mpandraharaha mpitety faritany hahafantatra bebe kokoa ny Nosy Malta sady nitazona an'i Malta & Gozo ho eo an-tampony. Ireo mari-pankasitrahana ireo ihany koa dia taratry ny fanoloran-tenan'ny MTA amin'ny fanofanana mpiasan'ny fitsangatsanganana ary miandrandra amim-panantenana izahay ny hitsena ireo mpizahatany any Amerika Avaratra bebe kokoa any amin'ny Nosy Malta amin'ny taona 2022 sy any aoriana.
Ny nosy Malta, eo afovoan'ny Ranomasina Mediterane, dia fonenan'ny fifantohana miavaka indrindra amin'ny lova naorina, anisan'izany ny haavon'ny haavon'ny UNESCO World Heritage Sites any amin'ny firenena rehetra na aiza na aiza. Valletta naorin'ny Knights of St. John mirehareha dia iray amin'ireo tranokalan'ny UNESCO sy Renivohitry ny Kolontsaina Eoropeana ho an'ny taona 2018. Ny lovan'i Malta amin'ny vato dia manomboka amin'ny rafitra vato tranainy indrindra eran-tany, ka hatramin'ny iray amin'ny Fanjakana Britanika mahatahotra indrindra. rafitra fiarovan-tena, ary ahitana fifangaroana manankarena amin'ny maritrano an-trano, ara-pivavahana ary ara-tafika tamin'ny vanim-potoana fahiny, tamin'ny Moyen Âge ary tamin'ny fiandohan'ny vanim-potoana maoderina. Miaraka amin'ny toetr'andro tsara tarehy, tora-pasika mahafinaritra, fiainana an-dalam-pandrosoana miroborobo ary tantara mahaliana 7,000 taona, dia misy zavatra maro azo jerena sy atao. Raha mila fanazavana fanampiny momba an'i Malta, tsidiho jci-malaysia.com.